Foko Kivalo – Menabe : miaro sy mivelona amin’ny ranomasina | NewsMada
Foko Kivalo – Menabe : miaro sy mivelona amin’ny ranomasina
Miavaka ny foko Kivalo any amin’ny morontsiraka an­drefana, faritra Menabe, eo amin’ny fiarovana ala honko. Mivelona eo anelanelan’ny ranomasina sy ny ala honko ireo foko ireo, mitandrina ma­fy ny tontolo manodidina: ranomasina sy ny ala, harena voajanahary miantoka ny jono sy ireo zavaboahary maro hafa loharanon-karena.
Najoron’ny foko Kivalo ny fikambanana «Analamaitso tsy ho gnan’olo» mandrindra ny asa rehetra amin’ny fiarovana ny ala honko sy ny jono an-dranomasina, ao anatin’izany ny fitandroana ny tontolo ma­nodidina, hiroboroboan’ny asa fihariana.
Mifandraika amin’izany ny fampandrosoana ny fizahantany, manohana io fikambanana io ny Agamo (Association des guides agréés de Morondava), Fikambanan’ireo mpitari-dia amin’ny fizahantany sy ny WWF, nahazoan’ny «Anala­mai­tso tsy ho gnan’olo» 4 350 dolara avy amin’ny Global Greengrants Fund ho fanampiana azy ireo.
Asan’ny GGF ny manohana ireo fikambanana any am-potony miasa ho fiarovana ny tontolo iainana ivelan’i Eta­zonia sy i Eoropa. Voafidy ny foko Kivalo, nahazo tohana manokana ny fikambanam-behivavy, nahazo fitaovana fahandroana, vata fampanga­tsiahana, fidiovana. Mampi­risika ireo namany hatrany ny filohan’ny fikambanana, Rato­vonjanahary Nivolalao, satria mandalo fotoan-tsarotra, toy ny sehatra rehetra, ny fikambanana ankehitriny : ratsy ny vokatry ny jono, tsy tonga ny mpizahatany noho ny valanaretina Coronavirus.
Mamolavola fihariana vaovao ny mponina ho fisakanana ny fandripahana ny tontolo iainana vokatr’izao krizy izao. Miomana amin’ny fotoana manaraka fahatongavan’ny mpizahatany ny foko Kivalo. «Manana fotodrafitrasa vaovao mendrika ny tanàna, afaka mandray vahiny ny tanàna» hoy i Kasety, filohan’ny fi­kambanana.